လူလဈရငျခိုးခိုးပွီး – My Blog
ကနြျောဒီစကျရုံရောကျပီး ၅ လလောကျအကွာမှာ သူမတို့အတှဲ ရောကျလာပါတယျ..သူမနာမညျက စှနျးတဲ့ မွနျမာလို လိမ်မျောသီးပေါ့.. ထိုငျးတှရေဲ့ ထုံးစံအတိုငျး မင်ျဂလာမဆောငျရသေးပဲ အတူ့နေ ပိုကျဆံအတူစုပီးမှ မင်ျဂလာဆောငျပီးမှ လငျမယားအရာရောကျတာမို့ ကွားထဲမှာ ပွတျသှားပီး အသဈရှာကွလညျး တျောရုံ ဂရုမစိုကျကွပုရယျ… ရောကျပီးမကွာပါပု တစကျရုံလုံးရဲ့ တဦးထဲသော မွနျမာလူမြိုး ကနြျောနဲ့ ခငျသှားပီး လကျဖကျသုတျကို မပီကလာပီကလာပွောပီး ကွိုကျတတျလာသလို သနပျခါးလညျး လိမျးတတျလာတယျ…ကနြျောနဲ့ ငါးအတူမြှား ဘူဖေးသှားစားတယျ.. ဖဲရိုကျတယျလေ…
သူ့ဘဲက ကနြျောတို့ ဖဲရိုကျနရေငျ ဘီယာမူးနတော မြားတယျ… ကွာလာလေ ရငျးနှီးမှုပိုလာတော့ မထိတထိလေး တှပွေောလာတယျ နောကျပိုငျး အစအနောကျသနျတဲ့ ကနြေျာ့အကွောငျး ပိုသိလာတော့ ပိုရဲတငျးပီး ပေါကျကရတှေ ပွောလာတယျလေ … ကနြျောတို့ စကျရုံမှာလညျး သူတဈယောကျပဲ လနျးပီး ငယျတာကို… ကနျြတာအကုနျ အမတျောပဈပီး သူ့ကိုကွ စသလို နောကျသလိုနဲ့ ခဈြလေးလို့ ချေါတယျ…။ကွောကလညျး တျော၂တောငျ့တယျ သူ့ဘဲက ခြိနျပွညျ့မူးနတေော့ မဖွိုနိုငျဘူးထငျတယျ… အသားအရညျက အစ ဝငျးနှဈပီး ဖှေးနတောဗြ… သယျရငျးတို့လညျး တှရေ့ငျ သှားရညျယိုမှာ …ဝတျလိုကျရငျ တီရှပျအကငြ်္ီနဲ့ အောကျက အလတျစတဈ အသားကပျ ဘောငျးဘီရှညျဆိုတော့ ထငျသာမွငျသာ ပိုရှိတာပေါ့။
တငျးရငျးပီး လုံးနတေဲ့ဖငျရယျ ဖွောငျ့စငျးတဲ့ ပေါငျတံရယျ တခါတလေ ပစ်စညျးတှေ ဘာတှေ ကုနျးကောကျလိုကျရငျ ဖောငျးကွှနတေဲ့ စပရယျက ကနြေျာ့ကို ရငေတျစတေယျ…ကနြျောလညျး မိနျးမနဲ့ ဝေးနတေော့ သူ့ကို ကြိတျခငျြနတော… အဲ့ညက…. ကနြျောတို့ ပိုကျဆံထှကျလို့ ထိုငျးရှမျးကိုးမှီး ကစားကွတယျ…ကနြျောလညျး လပျကီးကောငျးသလား မမေးနဲ့ ဒိုငျကိုငျတာရယျမို့ ငှကေို ဖှေးခံနတော… သူကထိုးသား သူတျောထိတယျ သူမြားကို လြျောရရငျတောငျ သူ့အိမျ ၂အိမျ အစားခံရတယျ… နောကျဆုံး ကနြေျာ့ဆီက ဘတျ၂၀၀၀ ဆှဲထားရတယျလေ… သူ့ဘဲက ခြောငျးဘေးက ကှပျပဈြမှာ မူးနပေီ ည၁၂ ထိုးလောကျမှာ ဝိုငျးသိမျးကွတယျ… သူတို့က အပွငျမှာနတေော့ သူ့ဘဲကို ပွနျဖို့ သှားချေါတယျ…
ကနြျောက ဖုနျးဖှငျ့တော့ ကိုအောက ဖုနျးဆကျလာလို့ ဖုနျးပွောနတေုနျး တံခါးခေါကျသံကွားလို့ ဖှငျ့ကွညျ့တော့ သူဖွဈနတေယျ သူ့ကို ပွနျပို့ပေးပါတဲ့ သူ့ဘဲက မူးနလေို့ ချေါမရဘူးတဲ့…ကနြျောလညျး ရလာတဲ့ အခှငျ့ရေးကို လကျလှတျမခံဘူး … အငျးဆိုပီး ကိုအောကိုနှုတျဆကျ ဖုနျးခပြီး စကျဘီးလေးဆှဲ ထှကျလာခဲ့တယျ… ညကမှောငျလညျးမှောငျ လူလညျးပွတျတော့ သူကွောကျတယျထငျပါတယျ နောကျကနေ ကနြေျာ့ကြောကုနျးကို အသာလကျဖဝါးနဲ့ ဖိပီးလိုကျလာတယျ… ကနြျောလညျး ပှငျ့၂လငျး၂ပဲ စကားစလိုကျတယျလေ…နငျ ငါ့ပိုကျဆံ ပွနျမပေးနဲ့တော့ ဒီတည ငါနဲ့ အိပျပေးနိုငျမလားလို့…။
သူလညျး အလိုကျသငျ့ ပွနျနမျးလာတော့ ကနြေျာ့လြှာကို သူ့ပါးစပျထဲထညျ့ပီး သူ့လြှာနဲ့ စဈတိုကျနလေိုကျရငျး ကနြေျာ့လကျတှကေ သူ့ခါးကနပေီး သူ့အကငြ်္ီကို ခြှတျဖို့ ကွိုးစားနသေလို သူကလညျး ကနြေျာ့အကငြ်္ီကွယျသီးတှေ ဖွုတျနလေရေဲ့ သူ့တီရှပျလေးကို ခြှတျလိုကျတော့ ဘယာ ပနျးရောငျလေးထဲက လုံးဝနျးတဲ့ နို့လေး၂လုံးက ကနြေျာ့ကို ဆှဲဆောငျလှနျးလှလို့ ဘယာကို ကနြျော အမွနျခြှတျလိုကျပီး လိမ်မျောသီးအကွီးစား အရှယျလောကျရှိတဲ့ နို့၂လုံးကို လကျ၂ဖကျနဲ့ ပငျ့မပီး ဆုပျကိုငျကာ နို့၂လုံးကွားကို တရှိုကျမကျမကျ ကွမျး၂လေးနမျးတော့ ကနြေျာ့ခေါငျးကို သူ့လကျနဲ့ လာဖကျတယျ…. ။
ကနြျောလညျး နို့ကိုငျထားတဲ့လကျတှကေို နောကျပဈပီး အကငြ်္ီကို ခြှတျခလြိုကျပီး သူ့ခါးကို ဖကျရငျး အနမျးတှကေို တဖွညျး၂ အောကျကို လြောလာလိုကျတယျ…ပီး သူ့အသားကပျဘောငျးဘီကို ဆှဲခြှတျတော့ ဘရာနဲ့ဆငျတူ ပနျးရောငျ ပငျတီလေး ထှကျလာပီး ကနြျော တခကျြနမျးလိုကျတော့ စတျောဘယျရီနံ့ သငျး၂လေးနဲ့အတူ စိုစှတျတဲ့ အထိတှကေို့ ရလိုကျတယျလေ….။ကနြျောလညျး မတျတပျပွနျရပျလိုကျပီး သူ့နှုတျခမျးတှကေို ပွနျနမျးတော့ ကနြေျာ့ ဂုတျကို သူ့လကျတှကေ သိုငျးဖကျလာပီး ကနြေျာ့ကို ကွမျး၂ပဲ သူပွနျနမျးလာတယျ…
ကနြျောလညျး သူ့ကို ခါးကနစှေခေ့နဲမတော့ သူ့ရဲ့ ခွထေောကျ၂ခြောငျးက ကနြေျာ့ခါးကို ရဈပတျလာပီး သူ့ကို ခှခြီသလို ဖွဈနကော နမျးရငျးနဲ့ပဲ အိပျယာကို လှမျးလာခဲ့ပါတယျ သူ့ကို စပရိနျမှယေ့ာပျေါ အလြားလိုကျတငျပေးပီး ကနြျောခါးပတျကိုဖွုတျပီး အပျေါက ဂငျြး ဘောငျးဘီကို ခြှတျရငျး သူ့အလှကို ရှုစားလိုကျတယျ…. ပနျးရောငျပငျတီလေးနဲ့ မိနျးမလှလေး တယောကျကို ကွညျ့ရငျး အောကျက ငပဲက တငျးနပေီလေ …ပီး ကနြျောလညျး သူ့အပျေါမှောကျခပြီး သူ့နှုတျခမျးတှကေို တခကျြပွနျနမျးပီး သူ့လညျတိုငျလေးတှေ ပခုံးသားလေးတှကေို အနမျးဖှဖှပေးရငျး နို့တှကေိုငျပီး နို့သီးလေးတှခွေပေေးလိုကျတယျ …တဖွညျး၂ခငျြး အောကျဆငျးလာပီး သူ့ရငျညှနျ့လေးတှကေို နမျးတော့ သူ့အသကျရှူသံပိုပွငျးလာတယျ… ။
ပါးစပျထဲ ငုံထားတဲ့နို့ကို ခြှတျပီး တဖကျနို့ကိုပွောငျးပီး နို့အုံအောကျခွကေနေ တရဈခွငျး လြှာနဲ့ရဈပီး နို့သီးခေါငျးခွထေိ ယကျလာခဲ့တယျ… နို့သီးခေါငျးလေးဆီရောကျတော့ နှုတျခမျး၂ခုနဲ့ အသာညှပျပီး လြှာနဲ့ အထဲကနထေိပျလေးကို တို့ထိတို့ထိ လုပျပေးရငျး သူ့ စပကို လကျနဲ့ စမျးကွညျ့တော့ အရညျတျောတျောစိုနပေီရယျ… ကနြျောလညျး နို့ကို ထုတျလိုကျပီး လကျနဲ့ပဲ ကိုငျကာ နို့သီးတှကေို လကျညှိုးနဲ့ ကလိရငျး လြှာကို အောကျကို တရှရှေ့ေ့ ဆငျးလာစခေဲ့ပီး သူ့ခကျြပတျလညျကို ဝလုံးရေး ခကျြကို ကလိရငျး လကျတှကေို နို့ကရုတျပီး ပငျတီလေးကို အသာ လိပျပီး ခြှတျလိုကျတော့။
အမှကေငျးပီး ဖောငျးကွှနကော အရညျတောကျတောကျစိုနတေဲ့ စပ ဖှေးဖှေးလေးကို တှတေ့ော့ တခကျြ နှာခေါငျးနဈအောငျနမျးတော့ အိပျယာပျေါကပါ ထထိုငျလာလို့ ရငျဘတျကို အသာတှနျး ပွနျလှဲစပေီး ဒူး၂လုံးကို ဆှဲထောငျ ပေါငျကို ဖွဲစကော ခေါငျးဝငျပီး စအိုဝလေးကနပေီး စောကျစထေိ့ လြှာနဲ့ယကျတငျပလိုကျတော့ ရှီး ခနဲညညျးသံကွားလိုကျတယျ ကနြျောလညျး စပကို လကျညှိုးလကျမသုံးဖွဲပီး စောကျစကေို့ လြှာနဲ့ ကောငျးကောငျးကလိပေးရငျး မကျြလုံးလှနျပီး သူ့ကိုကွညျ့တော့ အိပျယာခငျးစကို ဆှဲလိမျပီး မကျြစိစုံမှိတျကာ ခေါငျးကို ဘယျညာရမျးနပေါတယျ….
ကနြျောလညျး ပါးစပျတခုလုံး စပမှာအပျပီး စောကျစလေ့ေးကို လညျခြောငျးအားနဲ့ တခကျြ ကွမျး၂စုပျပေးလိုကျတော့ စောကျရညျတှေ ပိုထှကျလာတယျ …ပီး လြှာကို အထိထိထိုးထဲ့ပီး အထဲမှာကလိတော့ ကနြေျာ့ခေါငျးကို ကိုငျလာပီးဖိထားတယျ ကနြျောလညျး စပကို လြှာနဲ့ ကောငျး၂ကလိပေးယကျပေးတော့ သူတျော၂ ညညျးလာပီး တအား(ဟား)နဲ့ ကောငျးလိုကျတာ ဘယျလိုမြား လုပျနတောလဲဆိုပီး အရညျတှေ တျောတျောကွမျး၂ ထှကျလာပီး ကနြေျာ့ခေါငျးကို ဖိကာ အပီးလေးပီးသှားပီး စပလေး ပှစိပှစိ ဖွဈသှားကာ ကနြေျာ့ ခေါငျးက လကျတှေ လြော့သှားတယျ….။
အဲ့တော့မှ ကနြျောလညျး ငနျခြိုခြိုဖွဈနတေဲ့ သူ့စောကျရညျတှေ ကုနျအောငျ ယကျပေးလိုကျတယျ…. ပီး ကနြျော မတျတပျရပျပီး အတှငျးခံခြှတျတော့ သူကထထိုငျလာပီး သူကိုယျတိုငျ လကျ၂ဖကျနဲ့ ခြှတျတော့ အရမျးထနျနပေီဖွဈတဲ့ ကနြေျာ့ရဲ့ လီးက သူ့နှာခေါငျးကို တခကျြနမျးသှားတယျ…သူက ကနြေျာ့ဘဈကို အောကျထိဆှဲခြှတျတာမို့ ခွထေောကျ၂ခြောငျးကို အသာကွှပေးလိုကျတယျ… ပီး သူက ကနြေျာ့လီးကို နူးညံ့တဲသူ့လကျတဖကျနဲ့ ဖှဖှကိုငျပီး “အားပါး သနျ့ရေ နိလီးက မသေးပါလား ဂျေါလီကလညျး ထညျ့ထားသေးတယျ စှနျးခံနိုငျပါ့မလား မသိဘူး” ပွောပီး လကျနဲ့ဂှငျး၂ခကျြလောကျ တိုကျပီး လြှာနဲ့ ဒဈထိပျကို တို့တို့ပီး ကစားလာတယျ…
ဒဈကွားတှကေို လြှာနဲ့ယကျလိုကျ လီးကို လကျနဲ့ အပျေါဆှဲထောငျပီး အောကျကနေ လြှာနဲ့ယကျလိုကျ ဥ၂လုံးကို ပါးစပျနဲ့ ဟပျပီး ပွနျစှဲငုံလိုကျနဲ့ သူ့ပလှစှေမျးကိုကောငျးကောငျးပွနတေယျ ပီး ကနြေျာ့လီးကို ပါးစပျထဲ ငုံပီး ပါးတှပေါခြိုငျ့အောငျ စုပျပေးလာတယျ….ကနြျောပွနျ ဝဋျလညျတာပဲလေ သူ့လြှာက အငွိမျတခကျြမနဘေူးလေ သူ့ပါးစပျထဲက ကနြေျာ့လီးဒဈကို ရနျလာလာရှာနသေေးတာ… ကနြျောလညျး သူ့ခေါငျးကိုကိုငျပီး ၃ ၄ ခကျြလောကျဆောငျ့ပီး လိုးတော့မယျလို့ ပွောပီး သူ့ကို ပကျလကျလှနျစကော ကနြေျာ့လကျ၂ဖကျက ဒူးထောငျထားတဲ့ သူ့ရဲ့ပေါငျအောကျနေ အသာလြိုပီး သူ့ပေါငျ၂လုံးကိုငျဆှဲဖွဲကာ သူ့ပေါငျကွားထဲ ဒူးထောကျထိုငျပီး သူ့အဖုတျနဲ့ လီးတတနျးထဲ ဖွဈစတေယျ….။
ပွီးစပကို မလိုးသေးပဲ စောကျစကေို့၃ ၄ခကျြလောကျကလျောတော့ ဟာ ဆိုပီး ကနြေျာ့လီးကို သူ့လကျတဖကျက ကိုငျကာ သူ့စပနဲ့တတေ့ော့ ကနြျောလညျး ခါးကို ကော့ထိုးလိုကျတော့ လီးဒဈက စပထဲ စောကျရညျတှနေဲ့မို့ လှယျ၂ကူ၂ပဲ ပလဈဆို ဝငျသှားတယျ… အဲ့တော့မှ သူကလီးကို လှတျပီး ဖွညျး၂လိုးနျော နငျ့လီးက ပိုမကွီးပမေယျ့ ပိုရှညျပီး ဂျေါလီနဲ့တဲ့ …။ကနြျောလညျး အငျးလို့ပွောပီး လီးကို ဂျေါလီဝငျအောငျအသာ ခြော့သှငျးပီး ဂျေါလီဝငျမှ ခါးကိုအသာကော့ပီး တခကျြထဲအဆုံးထိ ဆောငျ့ထိုးပလိုကျတော့ အီး ခနဲအျောသံနဲ့ ကနြေျာ့ပခုံးကို ဆုတျကိုငျလာတယျ…ပီးခေါငျးအုံးကို ပါးစပျထဲကိုကျထားတယျ…
သဘောက ကနြေျာ့ကို အကွိုကျဆောငျ့ပေါ့… ကနြျောလညျး ပေါငျကွားက လကျကိုထုတျပီး သူ့ပခုံးတှကေို အောကျကလြိုကိုငျပီး တခကျြခွငျး စောငျ့ပေးလိုကျရငျး အရညျခြူနလေိုကျတယျ…သူ့ စပက အရညျရှဲလာတော့မှ ၂ခကျြဖွညျး၂ တခကျြပွငျးပွငျး နဲ့ ဆောငျ့ပေးတော့ ကနြေျာ့ဖိအားနဲ့ အောကျကစပရိနျ ကနျအားနဲ့ တျော၂နကျ၂ထိပီး အရမျးကောငျးတဲ့အရသာကို ခံစားရတယျလေ ….ပီး သူ့ကိုတစောငျးလှဲပီး တပေါငျကြျောပုံစံနဲ့ ဆောငျ့ပီး သူ့နို့တှကေို လှမျးကိုငျရငျး ဆောငျ့လိုးတယျ …ပီး သူ့နောကျမှာ ဝငျလှဲပီး ပုဇှနျတုပျကှေးပုံစံနဲ့ နောကျကနေ သူ့နို့တှကေို ညှဈပီး ကွမျး၂လိုးတော့ ခေါငျးအုံးကိုကျထားရာက လှတျပီး သူ ညညျးလာတယျ ….။
အခနျးမှာလညျး သူ့ညညျးသံ တအားအား ကနြေျာ့မာနျတငျးသံ နဲ့ သူ့တငျပါးနဲ့ ကနြေျာ့ဆီးခုံရိုကျသံတှေ ဆူညံနပေီး အခကျြ၂၀လောကျအကွာမှာ သူရောကနြျောရော ကွမျး၂လေး ပထမအခြီပီးသှားတယျ… ပွီးသှားတော့ သူက ကနြေျာ့ လကျမောငျးပျေါ အိပျရငျး “ကောငျးလိုကျတာ အသနျ့ရယျ ဟိုကောငျလုပျပေးတာ တခါမှ ငါကောငျးကောငျး မပီးဖူးသေးဘူး နငျလုပျတာ ငါအရမျးကောငျးတယျ သူ့ဟာက တိုတယျဟ ငါမထိဘူး ပီးတော့ နငျ ငါ့စပယကျတာ အရမျးကောငျးတယျ” လို့ ပွောလာတယျ…ကနြျောက “တကယျလား” လို့မေးတော့ ”အငျး” လို့ပွောပီး “ရသှေားဆေးအုံးမယျ” ဆိုပီး ကနြေျာ့လကျကိုဆှဲကာ သနျ့စငျခနျးသို့ ထှကျလာတယျ…
ရောကျတော့ သူက ရပေနျးကို ယူကာထိုငျလိုငျပီး ကနြေျာ့လီးကို တယုတယပဲ အသာကိုငျပီး ရပေနျးကို ဖွညျး၂ ညှဈကာ ဆေးပေးတယျ လကျထိပျလေးနဲ့ ဒဈတေ ဒဈကွားတှကေို ဆပျပွာလေး တို့တို့ပီး ဆေးပေးတော့ ရအေေး၂ရဲ့ အထိတှေ့ သူ့လကျဖွားရဲ့ နူးညံ့နှေးထှေးတဲ့ အထိတှကွေ့ောငျ့ ကနြေျာ့လီးက မပြော့မမာပွနျဖွဈလာတယျလေ…။ပွီး သူက ဥတှရေော ပေါငျကွား ဖငျကွားတှရေော သခြောဆေးပေးပီး နှုတျခမျးလေးနဲ့ ကနြေျာ့လီးထိပျကို ဖှဖှလေးလာနမျးတော့ ကနြေျာ့လီးက အလနျ့တကွား ခေါငျးထောငျကွညျ့ပါတယျ…ပီး ကနြေျာ့လီးကို သူ့ပါးမှာကပျပီး “ငါတော့ စှဲသှားပီ ဘယျလိုလုပျမလဲ” တဲ့ ပွောပီး ကနြေျာ့ကိုမော့ကွညျ့တော့ သူ့မကျြဝနျးမှာ မကျြရညျဝဲနတေယျ…။
ကနြျောလညျး ဘာမှမပွောပဲ ဆောငျ့ကွောငျ့ ထိုငျခလြိုကျကာ သူ့ပေါငျကိုဖွဲစပေီး သူ့စပကို ရပွေနျဆေးပေးလိုကျတယျ … စပကို လကျနဲ့ပှတျရငျး နို့လေးကို ငုံစို့တော့ ခေါငျးလေးမော့ပီး ကနြေျာ့ဆံပငျတှကေို ဖှနတေယျ … ကနြျောလညျး စပလေးကို အသာဖွဲပီး ရပေနျးနဲ့ ဆေးပေးတော့ စတျောဘယျရီနံ့သငျးနတေဲ့ စပဆေးတဲ့ ဆပျပွာလေးယူပေးတယျ …ကနြျောလညျး ကွငျနာစှာ ဖှဖှလေးပဲ ပှတျသပျဆေးပေးတော့ သူက ကနြေျာ့လီးကို ကိုငျပီး ဂှငျးတိုကျပေးတယျ…ကနြျောလညျး ထပျလိုးခငျြသေးတာမို့ သူ့ကို ပှပေီ့း သနျ့စငျခနျးကထှကျတော့ ကနြေျာ့ဂုတျကို ယီးလေးခိုပီး ပါလာတယျလေ….
ပီးသူ့ကို အသာပဲမှယေ့ာပျေါ ခတြော့ ကနြေျာ့မကျြနှာကို တခကျြပွုံးကွညျ့ပီး ကနြေျာ့နှုတျခမျးကို နမျးလာတယျ…ကနြျောလညျး တနျပွနျ နမျးပီး သူ့နို့လေးတှေ ကိုငျညှဈတာပေါ့… သူက ကနြေျာ့ခါးကိုဖကျပီး သူအပျေါရောကျအောငျ ကွိုးစားလာတော့ ကနြျောအလိုကျသငျ့ပဲ ပကျလကျလှနျပေးတော့ နှုတျခမျးခွငျး နမျးနရောက ခှာပီး ကနြေျာ့မကျြနှာကို ငုံ့ကွညျ့ပီး ပါးကိုနမျးတယျ ပီး နှုတျခမျးကို တခကျြနမျးတယျ နောကျလညျပငျး ရသျညှနျ့တှေ နမျးပီး ကနြျောနို့ကို သူစို့လိုကျ လြှာနဲ့ကလိလိုကျလုပျရငျး လကျက လီးကိုကိုငျပီး ဂှငျးထုပေးနတေယျ… ။
ကနြျော ဘယျလိုနမေယျထငျသလဲ… အသဲထဲစိမျ့အောငျ ယားသလိုလို တျော၂နရေခကျပီး အိပျယာခငျးစတှေ ဆှဲလိုကျ သူ့ခေါငျးကို ကိုငျလိုကျနဲ့ ၅နှဈပေါငျးလာတဲ့ မိနျးမတောငျ အဲ့လို မလုပျပေးဖူးခဲ့တော့ တျော၂ခံစားရတာဗြာ… ကိုယျခငျြးလညျး စာသှားတယျ … ငါလုပျတုနျးကလညျး သူဒီလိုပဲနမှောပဲလို့… တျောတျောဖီးဖွဈပီး ခံကောငျးသလို အောကျက လီးကလညျး ဒငျနပေီလေ… ပီးသူက အောကျကို ဆငျးပီး ကနြေျာ့လီးကို ပါးစပျထဲထညျ့ငုံလိုကျတယျ လကျတှကေလညျး အငွိမျမနဘေူးဗြာ… ပေါငျတှငျးသားတှကေို ဖှဖှလေးပှတျလိုကျ.. .ဥတှကေို ဖှဖှလေးညှဈလိုကျနဲ့ ယားတဲ့အရသာ အောငျ့တောငျ့၂ အရသာ လီးစုပျခံရတဲ့ အရသာတှနေဲ့ တျော၂ ကောငျးနပေီ…
ကနြျောလညျး မနနေိုငျတော့တာနဲ့ သူဖငျကို ကနြေျာ့မကျြနှာပျေါ ဆှဲယူပီး စပကို ပွနျယကျပလိုကျတယျ… ၆၉ပုံစံနဲ့မို့ သူ့စပ အတှငျးသားတှထေိ ဖွဲကွညျ့ပီး လကျခလညျနဲ့ မှလေိုကျ ခေါငျးကိုကွှပီး ပါးစပျကို ကယျြ၂ဟပီး စပတခုလုံးငုံပီး လြှာနဲ့ကလိတယျ… သူလီးစုပျတာလညျး ပိုကွမျးလာတယျ… ကနြျောလညျး လကျညှိုးကို အသာ ခရပှေငျ့မှာ ဝလုံးဆှဲပီး သူ့စပကထှကျလာတဲ့ အရညျကွညျကို လူးလိုကျပီး ဖငျထဲအသာထိုးထညျ့တော့ “အ”ခနဲ ဖွဈပီး လီးစုပျရာက ခေါငျးလေးမော့လာတယျ… ကနြျောလညျး အသာပဲ လြှာနဲ့ အစိလေးကို မထိတထိကစားရငျး လကျညှိုးနဲ့ ဖငျကိုလိုးနတေော့ သူ့ခမြာ လီးတောငျမစုပျနိုငျပဲ လကျထောကျခေါငျးမော့ပီး ဖငျကို ကော့ကော့ထိုးလာတယျ …။
စောကျရညျကလညျး တျော၂ရှမျးနပေီမို့ လကျထဲက လကျညှိုးကို ကွမျးကွမျးမှပေီးထုတျလိုကျတယျ… ပီး လကျညှိုးရော လကျခလညျကိုရော စပထဲ ထိုးထညျ့ပီး အဝငျအထှကျ ၄ ၅ခကျြလောကျလုပျပီး စောကျရညျလူးပီး ဆှဲထုတျကာ ဖငျထဲကို ဖွညျး၂ခငျြး ထိုးထညျ့တော့ နာတယျတဲ့… ။ကနြျော ဘာမှပွနျမပွောပဲ စပကို လြှာနဲ့ ကွမျး၂ယကျတော့ သူ့ဖငျပိုပဈပေးလာခြိနျ လကျ၂ခြောငျးကို အဆုံးထိ စိုကျထိုးပလိုကျတယျ…. ပီးမှ ဖွညျး ၂ ခငျြး လကျကိုလှညျ့ယူပီး အပေါကျခြဲ့တော့ ဖငျကွှကျသားတှကေ ညှဈထားတာနဲ့ ကနြျောလညျး စပကိုယကျပီး တငျပါးကို စပျစပျလေးရိုကျတော့ အား ခနဲအျောပီး အရညျတခြို့ ထှကျလာတယျ….
ကနြျောလညျး အခြိနျတနျပီမို့ သူ့ဖငျကိုမပီး ကနြေျာ့ခွထေောကျ၂ခြောငျးကိုဆှဲထုတျတော့ ကနြေျာ့ရှမှေ့ာ သူကကုနျး၂လေး ကနျြခဲ့တာပေါ့ …ကနြျောလညျး မုဆိုး ဒူးထောကျထိုငျပီး ဖငျကိုကွှကာ သူ့စပကို လီးနဲ့တလေို့ကျတယျ… နောကျလကျတဖကျက သူ့ခါးကို ကိုငျပီး လကျတဖကျက သူ့နို့ကိုဆှဲပီး လီးကိုဖွညျးဖွညျးခငျြး အဆုံးထိသှငျးပလိုကျတယျ…. အရညျတှေ ရှဲနတောမို့ လီးကရှောရှောရှူရှူပဲ ဝငျသှားတယျ… ကနြျောလညျး အထုတျအသှငျှးှမှနျမှနျလေးပဲ လုပျပေးတော့ သူ့ညညျးသံလေး ထှကျလာပါတယျ …. ကနြျောလညျး သူခံနိုငျမှနျးသိလာတော့ လီးကို ဒဈဖြားထိထုတျ၂ပီး နညျး၂ကွမျး၂ဆောငျ့လိုးတော့ တအငျး၂ညညျးသံနဲ့အတူ အရညျတှကွေောငျ့ တဘှတျဘှတျမွညျလာတယျ ….။
ကနြျောလညျး ပိုကွမျး၂ဆောငျ့ရငျး ၄ ၅ ၁၀ခကျြလောကျနတေော့ လီးကို စပထဲကဆှဲထုတျတော့ သူတခကျြလှညျ့ကွညျ့တယျ ကနြျောလညျး သူ့ဖငျကို ပိုမထောငျလိုကျတော့ သူရှကေို့ငိုကျသှားကာ ဖငျလေးတျော၂ထောငျသှားတော့ ကနြျော လြှာနဲ့ စပကို ၂ခကျြလောကျယကျလိုကျပီး မတျတပျရပျ ဒူးကှေးပီး လီးကို စပမှာတကေ့ာ ခှေးကုနျး ပုံစံမြိုးနဲ့ လီးကို တခကျြထဲကွမျး၂ ဆောငျ့သှငျးပလိုကျတော့ ဘှတျခနဲအသံနဲ့အတူ လီးဟာ စပထဲ အဆုံးထိဝငျသှားပီး သူ့ဖငျနဲ့ ကနြေျာ့ဆီးခုံကပျသှားတယျ ….ကနြျောလညျး ကွမျး၂ပဲ ဆောငျ့လိုးမိတယျ … သူလညျး တအငျးအငျး တအားအားနဲ့ ဖငျကွီးကို ကော့ကော့ပေးလာတယျ …။
ကနြျောလညျး မောလာတော့ လီးကိုခြှတျပကျလကျလှနျလိုကျပီး သူ့ကို အပျေါကနခေိုငျးတော့ ကနြေျာ့ခါးကိုခှပီး သူ့စပမှာ ကနြေျာ့လီးကိုငျတပေီ့းထိုငျခတြယျ မကျြနှာလေးရှုံ့ပီး လီးကို အဆုံးထိဝငျအောငျ ထိုငျခပြီး နှုတျခမျးလေးကိုကျ လကျလေးထောကျပီး တခကျြခွငျးစီဆောငျ့လာတာကို ကွညျ့ရတာကို ကဗြာတပုဒျဖတျနရေသလို အရသာရှိလိုကျတာလေ … ပီးသူအားမရတော့ဘူး ထငျပါရဲ့ ကွမျး၂ဆောငျ့လာပီး “နို့စို့ပေးပါ အသနျ့ရယျ” ဆိုတော့ ကနြျောလညျး ခွဆေငျးရကျ ထိုငျပီး သူ့နို့တှေ ကိုငျညှဈစို့ပေးရငျး အခကျြ၂၀ လောကျနတေော့ သူနောကျကို လှနျခပြလိုကျတယျ ကနြျောသိတယျ သူပီးသှားပီဆိုတာကို… “ဟာ….ကောငျးလိုကျတာ အသနျ့ရယျ စှနျးပီးသှားပီ နငျမပီးသေးဘူးမလား လုပျခငျြလုပျလေ” ဆိုတော့။
ကနြျောက “စှနျး ဖငျကိုလုပျခငျြတယျ” လို့ပွောတော့ သူမကျြလုံးလေးပွူးရငျး “ဟာ နာလိမျ့မယျ ဟိုကောငျတောငျးတာတောငျ စှနျးမပေးဘူး” လို့ပွောတော့ ကနြျောက “စပလညျး စလိုးခါစ နာတာပဲလေ နောကျကောငျးလာတာပဲ မဟုတျဘူးလား ဖငျလညျး ဒီလိုပဲလေ” လို့ပွောတော့ သူက “စှနျးဖငျကို တျော၂လုပျခငျြတယျပေါ့လေ အငျးလေ စှနျးပေးမယျ စှနျးမှာဖငျပဲ အသဈကနျြတာ အသနျ့အတှကျပေါ့ ဖွညျး၂တော့ လိုးနျော” တဲ့ အာ့နဲ့ ကနြျောလညျး မုနျ့ရသှားတဲ့ ခလေးလို သူ့ကို ရီပွပီး သူ့ယှကြား ခေါငျးလိမျးဆီဗူးကို ယူပီး သူ့မကျြနှာရှသှေ့ားရပျတော့ အလိုကျသိစှာပဲ လီးကို ဂှငျးတိုကျခါ “အာ့ဒါ ဘာလုပျဖို့လဲ ” လို့မေးတော့ ကနြျောက “စှနျးဖငျလိုးရငျ မနာအောငျလေ ” လို့ပွောတော့ သူအသာပဲ ကနြေျာ့လီး ကို စုပျပေးပါတယျ …။
ကနြျောလညျး လီး ၁၀ခကျြလောကျ အစုပျခံပီး လီးကို ခေါငျးလိမျးဆီရှဲရှဲသုတျ ဖငျဝကိုလညျးသုတျပီး ဖငျထဲကိုလညျး လကျညှိုးနဲ့ ကလျောပီး ရှဲနအေောငျထညျ့ကာ လကျညှိုးလကျခလညျ ၂ခြောငျးပူးထဲ့ပီး ဖငျပေါကျခြဲ့ပီးမှ ဖငျဝကို လီးတပေီ့းမှ “စိတျကို လြော့ထားနျော စှနျး ” လို့ပွောတော့ သူခေါငျးလေးညိတျပွ ရှာတယျ…. ကနြျောလညျး လီးကို ဖွညျး၂ ခငျြးဖိသှငျးတော့ ဒဈဝငျသှားပီး”အား နာလိုကျတာ ပွနျထုတျပါ အသနျ့ရယျ မရလောကျဘူး” ဆိုပီး ခေါငျးလေးရမျးကာ ပွောလာတယျ.. ကနြျောလညျး ခေါငျးဝငျကိုယျဆံ့ဆိုတဲ့အတိုငျး ဒီအခွနေရေောကျမှ လကျလှတျမခံနိုငျတော့ပု ခါးကို တငျးတငျးကိုငျပီး ဂျေါလီဝငျအောငျထိုးထညျ့ပီး လကျက အစကေို့ ခွပေေးလိုကျတယျ…။
သူလညျး ပွောမရမှနျး သိသှားတယျထငျပ ညိမျသှားပီး “ဖွညျး၂လုပျနျော နာတယျ” တဲ့…ကနြျောလညျး စိတျခလြို့ ပွောပီး အစခွေ့နေတေဲ့ လကျကိုလှတျပီး စိတျကို လီးမှာပဲထညျ့ပီး ခါးကိုကိုငျပီး ဖွညျး၂ခငျြး ဆကျသှငျးတော့ သူက သူ့အစကေို့ သူ့လကျနဲ့ခွပေါတယျ… ကနြျောလညျး လီးကို ဆုံးထိသှငျးပီးတော့ အသာငွိမျပီး သူ့နို့လေးတှကေို ဖှဖှလေး ညှဈလိုကျ နို့သီးလေးတှကေလိလိုကျ ကြောပွငျလေး နမျးလိုကျလုပျပီး သူ တအငျး၂ဖွဈလာတေော့မှ လီးကို နညျး၂ဆှဲထုတျလိုကျ ပွနျသှငျးလိုကျလုပျရတယျ… သူ့ဖငျကွှကျသားတှရေဲ့ ညှဈတဲ့ဒဏျတှကေို တျော၂ခံစားရတာလေ… ကနြျောလညျး ဖွညျး၂ဖွညျးခငျြးပဲ လိုးညှောငျ့နပေီး သူ့ကွှကျသားတှေ ခံနိုငျအောငျ စောငျ့နမေိတယျ သူလညျး ဖငျဇိမျတှလေ့ာတယျထငျတယျ ဖငျကို ကော့၂ပေးလာတယျ …
အာ့နဲ့ ကနြျောလညျး တဝကျလောကျ စမျးပီး ထုတျသှငျးလုပျရငျး သူက တအီးအီးနဲ့ ညညျးနပေီး ဖငျကို ပိုကော့လာတော့ သူခံနိုငျမှနျး ကနြျောသိလာတော့ နညျး၂ကွမျးလိုကျတယျ။သူကလညျး တျော၂ကောငျးလာတယျထငျတယျ … “စှနျး ခံနိုငျပီ ဆောငျ့ဆောငျ့” ဆိုတော့ ကနြျောလညျး မညှာတော့ပဲ သူတငျပါးကို ၂ခကျြလောကျရိုကျလိုကျ ဆောငျ့လိုကျနဲ့ သူက အဲ့လိုရိုကျတာကွိုကျပုံရတယျ ပိုပီး ဖငျကို ကော့၂ဆောငျ့ပေးလာတယျ ကနြျောလညျး အခကျြ ၂၀ ကွမျး၂ဆောငျ့ရငျး ပီးခငျြလာတော့ လီးကို ဖငျထဲက ဆှဲထုတျပီး စပထဲ ပွောငျးလိုးပီး ကွမျး၂ဆောငျ့ရငျး သူ့စပထဲ ကနြေျာ့ သုတျရညျတှေ ပနျးထညျ့ပီး ခဏ အမောဖွကော ပွနျခဲ့ပါတယျ… နောကျရကျတှမှောတော့ နလေ့ညျခငျး လူလဈရငျ ကနြေျာ့အခနျး ရောကျလာပီး တခါတလေ လီးစုပျပေးတယျ တခါတလေ အပျေါက ဆောငျ့ပေးတယျ ကနြျောဖငျခခြငျြလညျး ခံပေးပါတယျ……ပွီးပါပွီ။
ကျနော်ဒီစက်ရုံရောက်ပီး ၅ လလောက်အကြာမှာ သူမတို့အတွဲ ရောက်လာပါတယ်..သူမနာမည်က စွန်းတဲ့ မြန်မာလို လိမ္မော်သီးပေါ့.. ထိုင်းတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း မင်္ဂလာမဆောင်ရသေးပဲ အတူ့နေ ပိုက်ဆံအတူစုပီးမှ မင်္ဂလာဆောင်ပီးမှ လင်မယားအရာရောက်တာမို့ ကြားထဲမှာ ပြတ်သွားပီး အသစ်ရှာကြလည်း တော်ရုံ ဂရုမစိုက်ကြပုရယ်… ရောက်ပီးမကြာပါပု တစက်ရုံလုံးရဲ့ တဦးထဲသော မြန်မာလူမျိုး ကျနော်နဲ့ ခင်သွားပီး လက်ဖက်သုတ်ကို မပီကလာပီကလာပြောပီး ကြိုက်တတ်လာသလို သနပ်ခါးလည်း လိမ်းတတ်လာတယ်…ကျနော်နဲ့ ငါးအတူမျှား ဘူဖေးသွားစားတယ်.. ဖဲရိုက်တယ်လေ…
သူ့ဘဲက ကျနော်တို့ ဖဲရိုက်နေရင် ဘီယာမူးနေတာ များတယ်… ကြာလာလေ ရင်းနှီးမွုပိုလာတော့ မထိတထိလေး တွေပြောလာတယ် နောက်ပိုင်း အစအနောက်သန်တဲ့ ကျနော့်အကြောင်း ပိုသိလာတော့ ပိုရဲတင်းပီး ပေါက်ကရတွေ ပြောလာတယ်လေ … ကျနော်တို့ စက်ရုံမှာလည်း သူတစ်ယောက်ပဲ လန်းပီး ငယ်တာကို… ကျန်တာအကုန် အမတော်ပစ်ပီး သူ့ကိုကြ စသလို နောက်သလိုနဲ့ ချစ်လေးလို့ ခေါ်တယ်…။ကြောကလည်း တော်၂တောင့်တယ် သူ့ဘဲက ချိန်ပြည့်မူးနေတော့ မဖြိုနိုင်ဘူးထင်တယ်… အသားအရည်က အစ ဝင်းနှစ်ပီး ဖွေးနေတာဗျ… သယ်ရင်းတို့လည်း တွေ့ရင် သွားရည်ယိုမှာ …ဝတ်လိုက်ရင် တီရှပ်အင်္ကျီနဲ့ အောက်က အလတ်စတစ် အသားကပ် ဘောင်းဘီရှည်ဆိုတော့ ထင်သာမြင်သာ ပိုရှိတာပေါ့။
တင်းရင်းပီး လုံးနေတဲ့ဖင်ရယ် ဖြောင့်စင်းတဲ့ ပေါင်တံရယ် တခါတလေ ပစ္စည်းတွေ ဘာတွေ ကုန်းကောက်လိုက်ရင် ဖောင်းကြွနေတဲ့ စပရယ်က ကျနော့်ကို ရေငတ်စေတယ်…ကျနော်လည်း မိန်းမနဲ့ ဝေးနေတော့ သူ့ကို ကျိတ်ချင်နေတာ… အဲ့ညက…. ကျနော်တို့ ပိုက်ဆံထွက်လို့ ထိုင်းရှမ်းကိုးမှီး ကစားကြတယ်…ကျနော်လည်း လပ်ကီးကောင်းသလား မမေးနဲ့ ဒိုင်ကိုင်တာရယ်မို့ ငွေကို ဖွေးခံနေတာ… သူကထိုးသား သူတော်ထိတယ် သူများကို လျော်ရရင်တောင် သူ့အိမ် ၂အိမ် အစားခံရတယ်… နောက်ဆုံး ကျနော့်ဆီက ဘတ်၂၀၀၀ ဆွဲထားရတယ်လေ… သူ့ဘဲက ချောင်းဘေးက ကွပ်ပျစ်မှာ မူးနေပီ ည၁၂ ထိုးလောက်မှာ ဝိုင်းသိမ်းကြတယ်… သူတို့က အပြင်မှာနေတော့ သူ့ဘဲကို ပြန်ဖို့ သွားခေါ်တယ်…
ကျနော်က ဖုန်းဖွင့်တော့ ကိုအောက ဖုန်းဆက်လာလို့ ဖုန်းပြောနေတုန်း တံခါးခေါက်သံကြားလို့ ဖွင့်ကြည့်တော့ သူဖြစ်နေတယ် သူ့ကို ပြန်ပို့ပေးပါတဲ့ သူ့ဘဲက မူးနေလို့ ခေါ်မရဘူးတဲ့…ကျနော်လည်း ရလာတဲ့ အခွင့်ရေးကို လက်လွတ်မခံဘူး … အင်းဆိုပီး ကိုအောကိုနွုတ်ဆက် ဖုန်းချပီး စက်ဘီးလေးဆွဲ ထွက်လာခဲ့တယ်… ညကမှောင်လည်းမှောင် လူလည်းပြတ်တော့ သူကြောက်တယ်ထင်ပါတယ် နောက်ကနေ ကျနော့်ကျောကုန်းကို အသာလက်ဖဝါးနဲ့ ဖိပီးလိုက်လာတယ်… ကျနော်လည်း ပွင့်၂လင်း၂ပဲ စကားစလိုက်တယ်လေ…နင် ငါ့ပိုက်ဆံ ပြန်မပေးနဲ့တော့ ဒီတည ငါနဲ့ အိပ်ပေးနိုင်မလားလို့…။
သူလည်း အလိုက်သင့် ပြန်နမ်းလာတော့ ကျနော့်လျှာကို သူ့ပါးစပ်ထဲထည့်ပီး သူ့လျှာနဲ့ စစ်တိုက်နေလိုက်ရင်း ကျနော့်လက်တွေက သူ့ခါးကနေပီး သူ့အင်္ကျီကို ချွတ်ဖို့ ကြိုးစားနေသလို သူကလည်း ကျနော့်အင်္ကျီကြယ်သီးတွေ ဖြုတ်နေလေရဲ့ သူ့တီရှပ်လေးကို ချွတ်လိုက်တော့ ဘယာ ပန်းရောင်လေးထဲက လုံးဝန်းတဲ့ နို့လေး၂လုံးက ကျနော့်ကို ဆွဲဆောင်လွန်းလှလို့ ဘယာကို ကျနော် အမြန်ချွတ်လိုက်ပီး လိမ္မော်သီးအကြီးစား အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ နို့၂လုံးကို လက်၂ဖက်နဲ့ ပင့်မပီး ဆုပ်ကိုင်ကာ နို့၂လုံးကြားကို တရှိုက်မက်မက် ကြမ်း၂လေးနမ်းတော့ ကျနော့်ခေါင်းကို သူ့လက်နဲ့ လာဖက်တယ်…. ။
ကျနော်လည်း နို့ကိုင်ထားတဲ့လက်တွေကို နောက်ပစ်ပီး အင်္ကျီကို ချွတ်ချလိုက်ပီး သူ့ခါးကို ဖက်ရင်း အနမ်းတွေကို တဖြည်း၂ အောက်ကို လျောလာလိုက်တယ်…ပီး သူ့အသားကပ်ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်တော့ ဘရာနဲ့ဆင်တူ ပန်းရောင် ပင်တီလေး ထွက်လာပီး ကျနော် တချက်နမ်းလိုက်တော့ စတော်ဘယ်ရီနံ့ သင်း၂လေးနဲ့အတူ စိုစွတ်တဲ့ အထိတွေ့ကို ရလိုက်တယ်လေ….။ကျနော်လည်း မတ်တပ်ပြန်ရပ်လိုက်ပီး သူ့နွုတ်ခမ်းတွေကို ပြန်နမ်းတော့ ကျနော့် ဂုတ်ကို သူ့လက်တွေက သိုင်းဖက်လာပီး ကျနော့်ကို ကြမ်း၂ပဲ သူပြန်နမ်းလာတယ်…
ကျနော်လည်း သူ့ကို ခါးကနေစွေ့ခနဲမတော့ သူ့ရဲ့ ခြေထောက်၂ချောင်းက ကျနော့်ခါးကို ရစ်ပတ်လာပီး သူ့ကို ခွချီသလို ဖြစ်နေကာ နမ်းရင်းနဲ့ပဲ အိပ်ယာကို လှမ်းလာခဲ့ပါတယ် သူ့ကို စပရိန်မွေ့ယာပေါ် အလျားလိုက်တင်ပေးပီး ကျနော်ခါးပတ်ကိုဖြုတ်ပီး အပေါ်က ဂျင်း ဘောင်းဘီကို ချွတ်ရင်း သူ့အလှကို ရွုစားလိုက်တယ်…. ပန်းရောင်ပင်တီလေးနဲ့ မိန်းမလှလေး တယောက်ကို ကြည့်ရင်း အောက်က ငပဲက တင်းနေပီလေ …ပီး ကျနော်လည်း သူ့အပေါ်မှောက်ချပီး သူ့နွုတ်ခမ်းတွေကို တချက်ပြန်နမ်းပီး သူ့လည်တိုင်လေးတွေ ပခုံးသားလေးတွေကို အနမ်းဖွဖွပေးရင်း နို့တွေကိုင်ပီး နို့သီးလေးတွေခြေပေးလိုက်တယ် …တဖြည်း၂ချင်း အောက်ဆင်းလာပီး သူ့ရင်ညွန့်လေးတွေကို နမ်းတော့ သူ့အသက်ရွူသံပိုပြင်းလာတယ်… ။
ပါးစပ်ထဲ ငုံထားတဲ့နို့ကို ချွတ်ပီး တဖက်နို့ကိုပြောင်းပီး နို့အုံအောက်ခြေကနေ တရစ်ခြင်း လျှာနဲ့ရစ်ပီး နို့သီးခေါင်းခြေထိ ယက်လာခဲ့တယ်… နို့သီးခေါင်းလေးဆီရောက်တော့ နွုတ်ခမ်း၂ခုနဲ့ အသာညှပ်ပီး လျှာနဲ့ အထဲကနေထိပ်လေးကို တို့ထိတို့ထိ လုပ်ပေးရင်း သူ့ စပကို လက်နဲ့ စမ်းကြည့်တော့ အရည်တော်တော်စိုနေပီရယ်… ကျနော်လည်း နို့ကို ထုတ်လိုက်ပီး လက်နဲ့ပဲ ကိုင်ကာ နို့သီးတွေကို လက်ညှိုးနဲ့ ကလိရင်း လျှာကို အောက်ကို တရွေ့ရွေ့ ဆင်းလာစေခဲ့ပီး သူ့ချက်ပတ်လည်ကို ဝလုံးရေး ချက်ကို ကလိရင်း လက်တွေကို နို့ကရုတ်ပီး ပင်တီလေးကို အသာ လိပ်ပီး ချွတ်လိုက်တော့။
အမွေကင်းပီး ဖောင်းကြွနေကာ အရည်တောက်တောက်စိုနေတဲ့ စပ ဖွေးဖွေးလေးကို တွေ့တော့ တချက် နှာခေါင်းနစ်အောင်နမ်းတော့ အိပ်ယာပေါ်ကပါ ထထိုင်လာလို့ ရင်ဘတ်ကို အသာတွန်း ပြန်လှဲစေပီး ဒူး၂လုံးကို ဆွဲထောင် ပေါင်ကို ဖြဲစေကာ ခေါင်းဝင်ပီး စအိုဝလေးကနေပီး စောက်စေ့ထိ လျှာနဲ့ယက်တင်ပလိုက်တော့ ရှီး ခနဲညည်းသံကြားလိုက်တယ် ကျနော်လည်း စပကို လက်ညှိုးလက်မသုံးဖြဲပီး စောက်စေ့ကို လျှာနဲ့ ကောင်းကောင်းကလိပေးရင်း မျက်လုံးလှန်ပီး သူ့ကိုကြည့်တော့ အိပ်ယာခင်းစကို ဆွဲလိမ်ပီး မျက်စိစုံမှိတ်ကာ ခေါင်းကို ဘယ်ညာရမ်းနေပါတယ်….
ကျနော်လည်း ပါးစပ်တခုလုံး စပမှာအပ်ပီး စောက်စေ့လေးကို လည်ချောင်းအားနဲ့ တချက် ကြမ်း၂စုပ်ပေးလိုက်တော့ စောက်ရည်တွေ ပိုထွက်လာတယ် …ပီး လျှာကို အထိထိထိုးထဲ့ပီး အထဲမှာကလိတော့ ကျနော့်ခေါင်းကို ကိုင်လာပီးဖိထားတယ် ကျနော်လည်း စပကို လျှာနဲ့ ကောင်း၂ကလိပေးယက်ပေးတော့ သူတော်၂ ညည်းလာပီး တအား(ဟား)နဲ့ ကောင်းလိုက်တာ ဘယ်လိုများ လုပ်နေတာလဲဆိုပီး အရည်တွေ တော်တော်ကြမ်း၂ ထွက်လာပီး ကျနော့်ခေါင်းကို ဖိကာ အပီးလေးပီးသွားပီး စပလေး ပွစိပွစိ ဖြစ်သွားကာ ကျနော့် ခေါင်းက လက်တွေ လျော့သွားတယ်….။
အဲ့တော့မှ ကျနော်လည်း ငန်ချိုချိုဖြစ်နေတဲ့ သူ့စောက်ရည်တွေ ကုန်အောင် ယက်ပေးလိုက်တယ်…. ပီး ကျနော် မတ်တပ်ရပ်ပီး အတွင်းခံချွတ်တော့ သူကထထိုင်လာပီး သူကိုယ်တိုင် လက်၂ဖက်နဲ့ ချွတ်တော့ အရမ်းထန်နေပီဖြစ်တဲ့ ကျနော့်ရဲ့ လီးက သူ့နှာခေါင်းကို တချက်နမ်းသွားတယ်…သူက ကျနော့်ဘစ်ကို အောက်ထိဆွဲချွတ်တာမို့ ခြေထောက်၂ချောင်းကို အသာကြွပေးလိုက်တယ်… ပီး သူက ကျနော့်လီးကို နူးညံ့တဲသူ့လက်တဖက်နဲ့ ဖွဖွကိုင်ပီး “အားပါး သန့်ရေ နိလီးက မသေးပါလား ဂေါ်လီကလည်း ထည့်ထားသေးတယ် စွန်းခံနိုင်ပါ့မလား မသိဘူး” ပြောပီး လက်နဲ့ဂွင်း၂ချက်လောက် တိုက်ပီး လျှာနဲ့ ဒစ်ထိပ်ကို တို့တို့ပီး ကစားလာတယ်…
ဒစ်ကြားတွေကို လျှာနဲ့ယက်လိုက် လီးကို လက်နဲ့ အပေါ်ဆွဲထောင်ပီး အောက်ကနေ လျှာနဲ့ယက်လိုက် ဥ၂လုံးကို ပါးစပ်နဲ့ ဟပ်ပီး ပြန်စွဲငုံလိုက်နဲ့ သူ့ပလွေစွမ်းကိုကောင်းကောင်းပြနေတယ် ပီး ကျနော့်လီးကို ပါးစပ်ထဲ ငုံပီး ပါးတွေပါချိုင့်အောင် စုပ်ပေးလာတယ်….ကျနော်ပြန် ဝဋ်လည်တာပဲလေ သူ့လျှာက အငြိမ်တချက်မနေဘူးလေ သူ့ပါးစပ်ထဲက ကျနော့်လီးဒစ်ကို ရန်လာလာရှာနေသေးတာ… ကျနော်လည်း သူ့ခေါင်းကိုကိုင်ပီး ၃ ၄ ချက်လောက်ဆောင့်ပီး လိုးတော့မယ်လို့ ပြောပီး သူ့ကို ပက်လက်လှန်စေကာ ကျနော့်လက်၂ဖက်က ဒူးထောင်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ပေါင်အောက်နေ အသာလျိုပီး သူ့ပေါင်၂လုံးကိုင်ဆွဲဖြဲကာ သူ့ပေါင်ကြားထဲ ဒူးထောက်ထိုင်ပီး သူ့အဖုတ်နဲ့ လီးတတန်းထဲ ဖြစ်စေတယ်….။
ပြီးစပကို မလိုးသေးပဲ စောက်စေ့ကို၃ ၄ချက်လောက်ကလော်တော့ ဟာ ဆိုပီး ကျနော့်လီးကို သူ့လက်တဖက်က ကိုင်ကာ သူ့စပနဲ့တေ့တော့ ကျနော်လည်း ခါးကို ကော့ထိုးလိုက်တော့ လီးဒစ်က စပထဲ စောက်ရည်တွေနဲ့မို့ လွယ်၂ကူ၂ပဲ ပလစ်ဆို ဝင်သွားတယ်… အဲ့တော့မှ သူကလီးကို လွတ်ပီး ဖြည်း၂လိုးနော် နင့်လီးက ပိုမကြီးပေမယ့် ပိုရှည်ပီး ဂေါ်လီနဲ့တဲ့ …။ကျနော်လည်း အင်းလို့ပြောပီး လီးကို ဂေါ်လီဝင်အောင်အသာ ချော့သွင်းပီး ဂေါ်လီဝင်မှ ခါးကိုအသာကော့ပီး တချက်ထဲအဆုံးထိ ဆောင့်ထိုးပလိုက်တော့ အီး ခနဲအော်သံနဲ့ ကျနော့်ပခုံးကို ဆုတ်ကိုင်လာတယ်…ပီးခေါင်းအုံးကို ပါးစပ်ထဲကိုက်ထားတယ်…
သဘောက ကျနော့်ကို အကြိုက်ဆောင့်ပေါ့… ကျနော်လည်း ပေါင်ကြားက လက်ကိုထုတ်ပီး သူ့ပခုံးတွေကို အောက်ကလျိုကိုင်ပီး တချက်ခြင်း စောင့်ပေးလိုက်ရင်း အရည်ချူနေလိုက်တယ်…သူ့ စပက အရည်ရွဲလာတော့မှ ၂ချက်ဖြည်း၂ တချက်ပြင်းပြင်း နဲ့ ဆောင့်ပေးတော့ ကျနော့်ဖိအားနဲ့ အောက်ကစပရိန် ကန်အားနဲ့ တော်၂နက်၂ထိပီး အရမ်းကောင်းတဲ့အရသာကို ခံစားရတယ်လေ ….ပီး သူ့ကိုတစောင်းလှဲပီး တပေါင်ကျော်ပုံစံနဲ့ ဆောင့်ပီး သူ့နို့တွေကို လှမ်းကိုင်ရင်း ဆောင့်လိုးတယ် …ပီး သူ့နောက်မှာ ဝင်လှဲပီး ပုဇွန်တုပ်ကွေးပုံစံနဲ့ နောက်ကနေ သူ့နို့တွေကို ညှစ်ပီး ကြမ်း၂လိုးတော့ ခေါင်းအုံးကိုက်ထားရာက လွတ်ပီး သူ ညည်းလာတယ် ….။
အခန်းမှာလည်း သူ့ညည်းသံ တအားအား ကျနော့်မာန်တင်းသံ နဲ့ သူ့တင်ပါးနဲ့ ကျနော့်ဆီးခုံရိုက်သံတွေ ဆူညံနေပီး အချက်၂၀လောက်အကြာမှာ သူရောကျနော်ရော ကြမ်း၂လေး ပထမအချီပီးသွားတယ်… ပြီးသွားတော့ သူက ကျနော့် လက်မောင်းပေါ် အိပ်ရင်း “ကောင်းလိုက်တာ အသန့်ရယ် ဟိုကောင်လုပ်ပေးတာ တခါမှ ငါကောင်းကောင်း မပီးဖူးသေးဘူး နင်လုပ်တာ ငါအရမ်းကောင်းတယ် သူ့ဟာက တိုတယ်ဟ ငါမထိဘူး ပီးတော့ နင် ငါ့စပယက်တာ အရမ်းကောင်းတယ်” လို့ ပြောလာတယ်…ကျနော်က “တကယ်လား” လို့မေးတော့ ”အင်း” လို့ပြောပီး “ရေသွားဆေးအုံးမယ်” ဆိုပီး ကျနော့်လက်ကိုဆွဲကာ သန့်စင်ခန်းသို့ ထွက်လာတယ်…
ရောက်တော့ သူက ရေပန်းကို ယူကာထိုင်လိုင်ပီး ကျနော့်လီးကို တယုတယပဲ အသာကိုင်ပီး ရေပန်းကို ဖြည်း၂ ညှစ်ကာ ဆေးပေးတယ် လက်ထိပ်လေးနဲ့ ဒစ်တေ ဒစ်ကြားတွေကို ဆပ်ပြာလေး တို့တို့ပီး ဆေးပေးတော့ ရေအေး၂ရဲ့ အထိတွေ့ သူ့လက်ဖြားရဲ့ နူးညံ့နွေးထွေးတဲ့ အထိတွေ့ကြောင့် ကျနော့်လီးက မပျော့မမာပြန်ဖြစ်လာတယ်လေ…။ပြီး သူက ဥတွေရော ပေါင်ကြား ဖင်ကြားတွေရော သေချာဆေးပေးပီး နွုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ကျနော့်လီးထိပ်ကို ဖွဖွလေးလာနမ်းတော့ ကျနော့်လီးက အလန့်တကြား ခေါင်းထောင်ကြည့်ပါတယ်…ပီး ကျနော့်လီးကို သူ့ပါးမှာကပ်ပီး “ငါတော့ စွဲသွားပီ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ” တဲ့ ပြောပီး ကျနော့်ကိုမော့ကြည့်တော့ သူ့မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်ဝဲနေတယ်…။
ကျနော်လည်း ဘာမှမပြောပဲ ဆောင့်ကြောင့် ထိုင်ချလိုက်ကာ သူ့ပေါင်ကိုဖြဲစေပီး သူ့စပကို ရေပြန်ဆေးပေးလိုက်တယ် … စပကို လက်နဲ့ပွတ်ရင်း နို့လေးကို ငုံစို့တော့ ခေါင်းလေးမော့ပီး ကျနော့်ဆံပင်တွေကို ဖွနေတယ် … ကျနော်လည်း စပလေးကို အသာဖြဲပီး ရေပန်းနဲ့ ဆေးပေးတော့ စတော်ဘယ်ရီနံ့သင်းနေတဲ့ စပဆေးတဲ့ ဆပ်ပြာလေးယူပေးတယ် …ကျနော်လည်း ကြင်နာစွာ ဖွဖွလေးပဲ ပွတ်သပ်ဆေးပေးတော့ သူက ကျနော့်လီးကို ကိုင်ပီး ဂွင်းတိုက်ပေးတယ်…ကျနော်လည်း ထပ်လိုးချင်သေးတာမို့ သူ့ကို ပွေ့ပီး သန့်စင်ခန်းကထွက်တော့ ကျနော့်ဂုတ်ကို ယီးလေးခိုပီး ပါလာတယ်လေ….
ပီးသူ့ကို အသာပဲမွေ့ယာပေါ် ချတော့ ကျနော့်မျက်နှာကို တချက်ပြုံးကြည့်ပီး ကျနော့်နွုတ်ခမ်းကို နမ်းလာတယ်…ကျနော်လည်း တန်ပြန် နမ်းပီး သူ့နို့လေးတွေ ကိုင်ညှစ်တာပေါ့… သူက ကျနော့်ခါးကိုဖက်ပီး သူအပေါ်ရောက်အောင် ကြိုးစားလာတော့ ကျနော်အလိုက်သင့်ပဲ ပက်လက်လှန်ပေးတော့ နွုတ်ခမ်းခြင်း နမ်းနေရာက ခွာပီး ကျနော့်မျက်နှာကို ငုံ့ကြည့်ပီး ပါးကိုနမ်းတယ် ပီး နွုတ်ခမ်းကို တချက်နမ်းတယ် နောက်လည်ပင်း ရသ်ညွန့်တွေ နမ်းပီး ကျနော်နို့ကို သူစို့လိုက် လျှာနဲ့ကလိလိုက်လုပ်ရင်း လက်က လီးကိုကိုင်ပီး ဂွင်းထုပေးနေတယ်… ။
ကျနော် ဘယ်လိုနေမယ်ထင်သလဲ… အသဲထဲစိမ့်အောင် ယားသလိုလို တော်၂နေရခက်ပီး အိပ်ယာခင်းစတွေ ဆွဲလိုက် သူ့ခေါင်းကို ကိုင်လိုက်နဲ့ ၅နှစ်ပေါင်းလာတဲ့ မိန်းမတောင် အဲ့လို မလုပ်ပေးဖူးခဲ့တော့ တော်၂ခံစားရတာဗျာ… ကိုယ်ချင်းလည်း စာသွားတယ် … ငါလုပ်တုန်းကလည်း သူဒီလိုပဲနေမှာပဲလို့… တော်တော်ဖီးဖြစ်ပီး ခံကောင်းသလို အောက်က လီးကလည်း ဒင်နေပီလေ… ပီးသူက အောက်ကို ဆင်းပီး ကျနော့်လီးကို ပါးစပ်ထဲထည့်ငုံလိုက်တယ် လက်တွေကလည်း အငြိမ်မနေဘူးဗျာ… ပေါင်တွင်းသားတွေကို ဖွဖွလေးပွတ်လိုက်.. .ဥတွေကို ဖွဖွလေးညှစ်လိုက်နဲ့ ယားတဲ့အရသာ အောင့်တောင့်၂ အရသာ လီးစုပ်ခံရတဲ့ အရသာတွေနဲ့ တော်၂ ကောင်းနေပီ…
ကျနော်လည်း မနေနိုင်တော့တာနဲ့ သူဖင်ကို ကျနော့်မျက်နှာပေါ် ဆွဲယူပီး စပကို ပြန်ယက်ပလိုက်တယ်… ၆၉ပုံစံနဲ့မို့ သူ့စပ အတွင်းသားတွေထိ ဖြဲကြည့်ပီး လက်ခလည်နဲ့ မွေလိုက် ခေါင်းကိုကြွပီး ပါးစပ်ကို ကျယ်၂ဟပီး စပတခုလုံးငုံပီး လျှာနဲ့ကလိတယ်… သူလီးစုပ်တာလည်း ပိုကြမ်းလာတယ်… ကျနော်လည်း လက်ညှိုးကို အသာ ခရေပွင့်မှာ ဝလုံးဆွဲပီး သူ့စပကထွက်လာတဲ့ အရည်ကြည်ကို လူးလိုက်ပီး ဖင်ထဲအသာထိုးထည့်တော့ “အ”ခနဲ ဖြစ်ပီး လီးစုပ်ရာက ခေါင်းလေးမော့လာတယ်… ကျနော်လည်း အသာပဲ လျှာနဲ့ အစိလေးကို မထိတထိကစားရင်း လက်ညှိုးနဲ့ ဖင်ကိုလိုးနေတော့ သူ့ခမျာ လီးတောင်မစုပ်နိုင်ပဲ လက်ထောက်ခေါင်းမော့ပီး ဖင်ကို ကော့ကော့ထိုးလာတယ် …။
စောက်ရည်ကလည်း တော်၂ရွမ်းနေပီမို့ လက်ထဲက လက်ညှိုးကို ကြမ်းကြမ်းမွေပီးထုတ်လိုက်တယ်… ပီး လက်ညှိုးရော လက်ခလည်ကိုရော စပထဲ ထိုးထည့်ပီး အဝင်အထွက် ၄ ၅ချက်လောက်လုပ်ပီး စောက်ရည်လူးပီး ဆွဲထုတ်ကာ ဖင်ထဲကို ဖြည်း၂ချင်း ထိုးထည့်တော့ နာတယ်တဲ့… ။ကျနော် ဘာမှပြန်မပြောပဲ စပကို လျှာနဲ့ ကြမ်း၂ယက်တော့ သူ့ဖင်ပိုပစ်ပေးလာချိန် လက်၂ချောင်းကို အဆုံးထိ စိုက်ထိုးပလိုက်တယ်…. ပီးမှ ဖြည်း ၂ ချင်း လက်ကိုလှည့်ယူပီး အပေါက်ချဲ့တော့ ဖင်ကြွက်သားတွေက ညှစ်ထားတာနဲ့ ကျနော်လည်း စပကိုယက်ပီး တင်ပါးကို စပ်စပ်လေးရိုက်တော့ အား ခနဲအော်ပီး အရည်တချို့ ထွက်လာတယ်….
ကျနော်လည်း အချိန်တန်ပီမို့ သူ့ဖင်ကိုမပီး ကျနော့်ခြေထောက်၂ချောင်းကိုဆွဲထုတ်တော့ ကျနော့်ရှေ့မှာ သူကကုန်း၂လေး ကျန်ခဲ့တာပေါ့ …ကျနော်လည်း မုဆိုး ဒူးထောက်ထိုင်ပီး ဖင်ကိုကြွကာ သူ့စပကို လီးနဲ့တေ့လိုက်တယ်… နောက်လက်တဖက်က သူ့ခါးကို ကိုင်ပီး လက်တဖက်က သူ့နို့ကိုဆွဲပီး လီးကိုဖြည်းဖြည်းချင်း အဆုံးထိသွင်းပလိုက်တယ်…. အရည်တွေ ရွဲနေတာမို့ လီးကရှောရှောရွူရွူပဲ ဝင်သွားတယ်… ကျနော်လည်း အထုတ်အသွင်ှးှမှန်မှန်လေးပဲ လုပ်ပေးတော့ သူ့ညည်းသံလေး ထွက်လာပါတယ် …. ကျနော်လည်း သူခံနိုင်မှန်းသိလာတော့ လီးကို ဒစ်ဖျားထိထုတ်၂ပီး နည်း၂ကြမ်း၂ဆောင့်လိုးတော့ တအင်း၂ညည်းသံနဲ့အတူ အရည်တွေကြောင့် တဘွတ်ဘွတ်မြည်လာတယ် ….။
ကျနော်လည်း ပိုကြမ်း၂ဆောင့်ရင်း ၄ ၅ ၁၀ချက်လောက်နေတော့ လီးကို စပထဲကဆွဲထုတ်တော့ သူတချက်လှည့်ကြည့်တယ် ကျနော်လည်း သူ့ဖင်ကို ပိုမထောင်လိုက်တော့ သူရှေ့ကိုငိုက်သွားကာ ဖင်လေးတော်၂ထောင်သွားတော့ ကျနော် လျှာနဲ့ စပကို ၂ချက်လောက်ယက်လိုက်ပီး မတ်တပ်ရပ် ဒူးကွေးပီး လီးကို စပမှာတေ့ကာ ခွေးကုန်း ပုံစံမျိုးနဲ့ လီးကို တချက်ထဲကြမ်း၂ ဆောင့်သွင်းပလိုက်တော့ ဘွတ်ခနဲအသံနဲ့အတူ လီးဟာ စပထဲ အဆုံးထိဝင်သွားပီး သူ့ဖင်နဲ့ ကျနော့်ဆီးခုံကပ်သွားတယ် ….ကျနော်လည်း ကြမ်း၂ပဲ ဆောင့်လိုးမိတယ် … သူလည်း တအင်းအင်း တအားအားနဲ့ ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ပေးလာတယ် …။
ကျနော်လည်း မောလာတော့ လီးကိုချွတ်ပက်လက်လှန်လိုက်ပီး သူ့ကို အပေါ်ကနေခိုင်းတော့ ကျနော့်ခါးကိုခွပီး သူ့စပမှာ ကျနော့်လီးကိုင်တေ့ပီးထိုင်ချတယ် မျက်နှာလေးရှုံ့ပီး လီးကို အဆုံးထိဝင်အောင် ထိုင်ချပီး နွုတ်ခမ်းလေးကိုက် လက်လေးထောက်ပီး တချက်ခြင်းစီဆောင့်လာတာကို ကြည့်ရတာကို ကဗျာတပုဒ်ဖတ်နေရသလို အရသာရှိလိုက်တာလေ … ပီးသူအားမရတော့ဘူး ထင်ပါရဲ့ ကြမ်း၂ဆောင့်လာပီး “နို့စို့ပေးပါ အသန့်ရယ်” ဆိုတော့ ကျနော်လည်း ခြေဆင်းရက် ထိုင်ပီး သူ့နို့တွေ ကိုင်ညှစ်စို့ပေးရင်း အချက်၂၀ လောက်နေတော့ သူနောက်ကို လှန်ချပလိုက်တယ် ကျနော်သိတယ် သူပီးသွားပီဆိုတာကို… “ဟာ….ကောင်းလိုက်တာ အသန့်ရယ် စွန်းပီးသွားပီ နင်မပီးသေးဘူးမလား လုပ်ချင်လုပ်လေ” ဆိုတော့။
ကျနော်က “စွန်း ဖင်ကိုလုပ်ချင်တယ်” လို့ပြောတော့ သူမျက်လုံးလေးပြူးရင်း “ဟာ နာလိမ့်မယ် ဟိုကောင်တောင်းတာတောင် စွန်းမပေးဘူး” လို့ပြောတော့ ကျနော်က “စပလည်း စလိုးခါစ နာတာပဲလေ နောက်ကောင်းလာတာပဲ မဟုတ်ဘူးလား ဖင်လည်း ဒီလိုပဲလေ” လို့ပြောတော့ သူက “စွန်းဖင်ကို တော်၂လုပ်ချင်တယ်ပေါ့လေ အင်းလေ စွန်းပေးမယ် စွန်းမှာဖင်ပဲ အသစ်ကျန်တာ အသန့်အတွက်ပေါ့ ဖြည်း၂တော့ လိုးနော်” တဲ့ အာ့နဲ့ ကျနော်လည်း မုန့်ရသွားတဲ့ ခလေးလို သူ့ကို ရီပြပီး သူ့ယွကျား ခေါင်းလိမ်းဆီဗူးကို ယူပီး သူ့မျက်နှာရှေ့သွားရပ်တော့ အလိုက်သိစွာပဲ လီးကို ဂွင်းတိုက်ခါ “အာ့ဒါ ဘာလုပ်ဖို့လဲ ” လို့မေးတော့ ကျနော်က “စွန်းဖင်လိုးရင် မနာအောင်လေ ” လို့ပြောတော့ သူအသာပဲ ကျနော့်လီး ကို စုပ်ပေးပါတယ် …။
ကျနော်လည်း လီး ၁၀ချက်လောက် အစုပ်ခံပီး လီးကို ခေါင်းလိမ်းဆီရွဲရွဲသုတ် ဖင်ဝကိုလည်းသုတ်ပီး ဖင်ထဲကိုလည်း လက်ညှိုးနဲ့ ကလော်ပီး ရွဲနေအောင်ထည့်ကာ လက်ညှိုးလက်ခလည် ၂ချောင်းပူးထဲ့ပီး ဖင်ပေါက်ချဲ့ပီးမှ ဖင်ဝကို လီးတေ့ပီးမှ “စိတ်ကို လျော့ထားနော် စွန်း ” လို့ပြောတော့ သူခေါင်းလေးညိတ်ပြ ရှာတယ်…. ကျနော်လည်း လီးကို ဖြည်း၂ ချင်းဖိသွင်းတော့ ဒစ်ဝင်သွားပီး”အား နာလိုက်တာ ပြန်ထုတ်ပါ အသန့်ရယ် မရလောက်ဘူး” ဆိုပီး ခေါင်းလေးရမ်းကာ ပြောလာတယ်.. ကျနော်လည်း ခေါင်းဝင်ကိုယ်ဆံ့ဆိုတဲ့အတိုင်း ဒီအခြေနေရောက်မှ လက်လွတ်မခံနိုင်တော့ပု ခါးကို တင်းတင်းကိုင်ပီး ဂေါ်လီဝင်အောင်ထိုးထည့်ပီး လက်က အစေ့ကို ခြေပေးလိုက်တယ်…။
သူလည်း ပြောမရမှန်း သိသွားတယ်ထင်ပ ညိမ်သွားပီး “ဖြည်း၂လုပ်နော် နာတယ်” တဲ့…ကျနော်လည်း စိတ်ချလို့ ပြောပီး အစေ့ခြေနေတဲ့ လက်ကိုလွတ်ပီး စိတ်ကို လီးမှာပဲထည့်ပီး ခါးကိုကိုင်ပီး ဖြည်း၂ချင်း ဆက်သွင်းတော့ သူက သူ့အစေ့ကို သူ့လက်နဲ့ခြေပါတယ်… ကျနော်လည်း လီးကို ဆုံးထိသွင်းပီးတော့ အသာငြိမ်ပီး သူ့နို့လေးတွေကို ဖွဖွလေး ညှစ်လိုက် နို့သီးလေးတွေကလိလိုက် ကျောပြင်လေး နမ်းလိုက်လုပ်ပီး သူ တအင်း၂ဖြစ်လာတော့မှ လီးကို နည်း၂ဆွဲထုတ်လိုက် ပြန်သွင်းလိုက်လုပ်ရတယ်… သူ့ဖင်ကြွက်သားတွေရဲ့ ညှစ်တဲ့ဒဏ်တွေကို တော်၂ခံစားရတာလေ… ကျနော်လည်း ဖြည်း၂ဖြည်းချင်းပဲ လိုးညှောင့်နေပီး သူ့ကြွက်သားတွေ ခံနိုင်အောင် စောင့်နေမိတယ် သူလည်း ဖင်ဇိမ်တွေ့လာတယ်ထင်တယ် ဖင်ကို ကော့၂ပေးလာတယ် …
အာ့နဲ့ ကျနော်လည်း တဝက်လောက် စမ်းပီး ထုတ်သွင်းလုပ်ရင်း သူက တအီးအီးနဲ့ ညည်းနေပီး ဖင်ကို ပိုကော့လာတော့ သူခံနိုင်မှန်း ကျနော်သိလာတော့ နည်း၂ကြမ်းလိုက်တယ်။သူကလည်း တော်၂ကောင်းလာတယ်ထင်တယ် … “စွန်း ခံနိုင်ပီ ဆောင့်ဆောင့်” ဆိုတော့ ကျနော်လည်း မညှာတော့ပဲ သူတင်ပါးကို ၂ချက်လောက်ရိုက်လိုက် ဆောင့်လိုက်နဲ့ သူက အဲ့လိုရိုက်တာကြိုက်ပုံရတယ် ပိုပီး ဖင်ကို ကော့၂ဆောင့်ပေးလာတယ် ကျနော်လည်း အချက် ၂၀ ကြမ်း၂ဆောင့်ရင်း ပီးချင်လာတော့ လီးကို ဖင်ထဲက ဆွဲထုတ်ပီး စပထဲ ပြောင်းလိုးပီး ကြမ်း၂ဆောင့်ရင်း သူ့စပထဲ ကျနော့် သုတ်ရည်တွေ ပန်းထည့်ပီး ခဏ အမောဖြေကာ ပြန်ခဲ့ပါတယ်… နောက်ရက်တွေမှာတော့ နေ့လည်ခင်း လူလစ်ရင် ကျနော့်အခန်း ရောက်လာပီး တခါတလေ လီးစုပ်ပေးတယ် တခါတလေ အပေါ်က ဆောင့်ပေးတယ် ကျနော်ဖင်ချချင်လည်း ခံပေးပါတယ်……ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged လူလဈရငျခိုးခိုးပွီး